Booliska Galmudug oo qabtay nin looga shakiyay Al-Shabaabnimo. - Wargeyska Faafiye
Home 2014 March 31 .Warka, Faafiye Latest news. Booliska Galmudug oo qabtay nin looga shakiyay Al-Shabaabnimo.
Booliska Galmudug oo qabtay nin looga shakiyay Al-Shabaabnimo.
March 31, 2014 · by	Liban Farah ·
Taliyaha qeybta booliska gobolka Mudug ee maamulka Galmudug, Maxamed Nuur Cali Gadaar ayaa sheegay in ninka laga soo qabtay duleedka Gaalkacyo, kaddib markii ay ka war heleen inuu ku sugan yahay halka laga soo qabtay.
Gadaar ayaa intaas ku daray in eedaysanaha oo ku xiran saldhigga booliska, baaritaan kaddib loo gudbin doono maxkamadda.
Wuxuu kaloo sheegay in booliska Gaalkacyo ee Galmudug uu dib xorriyaddooda u siiyey saddex qof oo midkood dumar yahay oo loo qabtay tuhun ku saabsanaa inay ka tirsan yihiin maleeshiyada Al-Shabaab, kuwaas oo baaritaan lagu sameeyey lagu ogaaday inaysan raad ku lahayn kooxda.
Maamullada gobollada dhexe ee dalka ayaa dadaal ugu jira sidii ay gacanta ugu dhigi lahaayeen firxadka maleeshiyada Al-Shabaab ee ka soo yaacaysa dagaallada ka dhanka ah ee ciidamada dowladda Soomaaliya iyo kuwa AMISOM ay ka wadaan dalka.
Dagaal culus oo ka socda South Sudan.
Somali Teen who fatally stabbed St. Paul man to be freed at 21; deportation possible.
Al-Shabaab oo la sheegay inay dhacday gargaarka ka yimid UK.